राधा माविले जित्याे प्रथम अध्यक्ष म्याग्दे कपकाे उपाधि – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun राधा माविले जित्याे प्रथम अध्यक्ष म्याग्दे कपकाे उपाधि – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun
राधा माविले जित्याे प्रथम अध्यक्ष म्याग्दे कपकाे उपाधि
प्रमुख समाचार२३ बैशाख २०७८, बिहीबार २०:११कोभिडसँग जुध्न म्याग्देले गर्यो यस्तो निर्णय
ऋषिङ न्युज२३ बैशाख २०७८, बिहीबार १६:२७ऋषिङमा फेरि दुःखद् घटना, मधुवनमा ट्याक्टर पल्टँदा वीरबहादुरको मृत्यु
कभर टाइटल२३ बैशाख २०७८, बिहीबार १४:४०९ जना थपिए सँगै बिहिबार तनहूँमा २९ जनामा संक्रमण
कभर टाइटल२३ बैशाख २०७८, बिहीबार १३:५५बिहीबार तनहुँमा २० संक्रमित थपिए
९ बैशाख २०७८, बिहीबार २०:२८
म्याग्दे:प्रथम अध्यक्ष म्याग्दे कप २०७८ तथा राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिताकाे उपाधि राधा माविले जितेको छ । मनहरीकाे आदर्श नमुना युवा क्लबकाे खेलमैदानमा बिहिवार सम्पन्न प्रतियोगितामा १२ स्वर्ण , ७ रजत र ४ काश्य सहित राधा माविले शिल्ड उचालेकाे म्याग्दे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारीले बताए ।
यस्तै ६ स्वर्ण , ३ रजत र ७ कास्य सहित जनगणपति मावि द्वितीय भएको छ भने ५ सवर्ण , ६ रजत र १० कास्य सहित मीन मावि तृतीय भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अधिकारीले बताए । यस्तै वडास्तरीय पुरूष भलिबल प्रतियोगितामा वडा नँ ७ प्रथम , वडा नँ ५ द्वितीय र वडा नँ ६ तृतीय भएका छन् भने महिला भलिबलमा वडा नँ ५ प्रथम , वडा नँ २ द्वितीय र वडा नँ ६ तृतीय भएकाे अधिकारीले बताए ।
बिजेता टिमलाई क्रमश ३० हजार , २० हजार , १५ हजार नगद तथा मेडल , ट्रफि र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको खेल संयोजक एवम् याेजना साखा प्रमुख श्रीराम खनालले बताए । प्रतियोगिताका बिजेताहरू लाई म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मायादेवी राना तथा उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरे र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारीले पुरस्कार बितरण गरेकाे शिक्षा शाखा प्रमुख बुद्धि सागर खनालले बताए ।
पुरस्कार बितरण एवम् समापन कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरू क्रमश पदमराज वाग्ले , शिव बहादुर अाले , प्रेमबहादुर अाले , गाैरबराज राना लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । प्रतियोगितामा छात्र कब्बडि तर्फ प्रथम मीन मावि थर्पु , द्वितिय रत्न मावि मनपाङ र तृतीय राधा मावि जामुने भएका छन् । यस्तै छात्रा कब्बडि तर्फ राधा मावि जामुने प्रथम , मीन मावि थर्पु द्वितिय र महेन्द्र मावि गुणादी तृतीय रहेका छन् ।
भलिबलमा मीन मावि पहिलो
छात्र भलिबल तर्फ प्रथम मीन मावि थर्पु , द्वितीय गणेश मावि छाङ्ग र तृतीय जनगणपति मावि धयेंरे रहेका छन् । यस्तै छात्रा तर्फ मीन मावि थर्पु प्रथम , राधा मावि जामुने द्वितीय र महेन्द्र मावि गुणादी तृतीय रहेकाे शिक्षा साखाका महेश भट्टराईले बताए । हाइजम पुरूष तर्फ जनगणपति मावि प्रथम , महेन्द्र मावि द्वितीय र तृतीय राधा मावि रहेका छन भने छात्रातर्फ महेन्द्र मावि प्रथम , जनगणपति मावि द्वितीय र मीन मावि तृतीय रहेका छन् ।
छात्र लङजममा जनगणपति प्रथम , राधा मावि द्वितीय र मीन मावि तृतीय भएका छन् । यस्तै छात्रामा राधा मावि प्रथम , महेन्द्र मावि द्वितीय र मीन मावि तृतीय रहेका छन् । त्रिपलजम पुरूष तर्फ महेन्द्र मावि प्रथम , जनगणपति मावि द्वितीय र मीन मावि तृतीय रहेका छन् । यस्तै छात्रा तर्फ राधा मावि प्रथम , महेन्द्र मावि द्वितीय र मीन मावि तृतीय भएका छन् ।
ज्यावलिङ थ्राे छात्र तर्फ राधा मावि प्रथम , महेन्द्र मावि द्वितीय र मीन मावि तृतीय भएका छन् । यस्तै छात्रा तर्फ महेन्द्र मावि प्रथम , राधा मावि द्वितीय र जनगणपति मावि तृतीय भएका छन् । छात्र सर्टजममा गणेश मावि महेन्द्र मावि राधा मावि क्रमश प्रथम , द्वितीय र तृतीय भएका छन् । यस्तै छात्रा तर्फ प्रथम राधा मावि , द्वितीय जनगणपति मावि र तृतीय महेन्द्र मावि रहेका छन् ।
रिले दाैड छात्र तर्फ जनगणपति मावि प्रथम भएको छ भने छात्रा तर्फ महेन्द्र रत्न , छात्रातर्फ राधा मावि प्रथम , मीन मावि द्वितीय , जनगणपति तृतीय मावि रहेका छन् । रिलेकै छात्रमा राधा मावि प्रथम , द्वितीय मीन मावि छन् । यस्तै छात्रा तर्फ राधा मावि , महेन्द्र मावि र जनगणपति मावि क्रमश प्रथम , द्वितीय र तृतीय भएका छन् ।
जनगणपति मावि प्रथम सय मिटर दाैडमा प्रथम , द्वितीय राधा मावि र तृतीय मीन मावि छन् । यस्तै छात्रा मा मीन ,राधा र महेन्द्र मावि क्रमश प्रथम द्वितीय र तृतीय भएका छन् । छात्र दुई सय मिटर दाैडमा जनगणपति मावि प्रथम , राधा मावि द्वितीय र मीन मावि तृतीय रहेका छन् भने छात्रा तर्फ मीन मावि प्रथम , राधा मावि द्वितीय र गणेश मावि तृतीय भएका छन् । चारसय मिटर दाैडमा महेन्द्र मावि प्रथम , द्वितीय राधा मावि र मीन मावि तृतीय भएको छन् । छात्रा ४०० मिटरमा राधा मावि प्रथम , रत्न मावि द्वितीय र जनगणपति मावि तृतीय भएका छन् ।
८००मिटर छात्र तर्फ राधा मावि प्रथम , मीन मावि द्वितीय र जनगणपति मावि तृतीय भएको संयाेजक खनालले बताए । यस्तै छात्रा तर्फ राधा मावि प्रथम ,मीन मावि द्वितीय र महेन्द्र मावि तृतीय भएका छन् । १५०० मिटर छात्रतर्फ राधा मावि प्रथम , मीन मावि द्वितीय र जनगणपति मावि तृतीय भएका छन् । यस्तै छात्रा तर्फ जनगणपति मावि प्रथम , द्वितीय रत्न मावि र तृतीय मीन मावि रहेका छन् । छात्र करांते ४२ केजी राधा मावि प्रथम र महेन्द्र मावि द्वितीय रहेका छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको ९ बैशाख २०७८, बिहीबार २०:२८ 566 Viewed
मानुङ इफेक्टः सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो ठाउँ चिनाउने लहर
लम्साल गाउँको त्यो रोगटे पिङ
ऋषिङमा फेरि दुःखद् घटना, मधुवनमा ट्याक्टर पल्टँदा वीरबहादुरको मृत्यु
मुख्यमन्त्रीका लागि मुख रसाएर बसेको छैनः हरिबहादुर चुमान
व्यासका सबै परीक्षा स्थगित, ट्युसन पनि पूर्णरुपमा बन्द गर्न निर्देशन
कोरोना संक्रमणमा मृत्युको रेकर्डः २४ घण्टामा ५८ को मृत्यु, साढे ८ हजार संक्रमित
‘सत्य डग्दैन कलि तग्दैन, हाम्रो दिन आयो’
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड ऋषिङः भलिबलको फाइनलका लागि शिव सरस्वती र महेन्द्रोदय भिड्ने
तनहुँमा कोभिड संक्रमित एकै दिन १६ पुगे, सक्रिय संक्रमित ८७
९ जना थपिए सँगै बिहिबार तनहूँमा २९ जनामा संक्रमण
बिहीबार तनहुँमा २० संक्रमित थपिए
व्यासले गर्भवती र जटिल बिरामीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स दिने, पत्रकारको कोभिड बिमा
बुधबार तनहुँमा ३६ कोरोना संक्रमित थपिए
मादीमा पौडी खेल्दा डुबेर मृत्यु
कोरोना संक्रमणबाट गण्डकी प्रदेशका चार जनाको मृत्यु